ZUK wuxuu ku soo laabtay taleefan cusub Juun 14 | Androidsis
Qiyaastii sanad ka hor Lenovo ayaa ku dhawaaqay xiritaanka ZUK. War dad badan ka xumaaday, maaddaama moodooyinkani ahaayeen calanka runta ah ee sumadda. In kasta oo ay u muuqato inay shirkaddu beddeshay go'aankeeda maxaa yeelay waxay dib u soo nooleyn doonaan shirkadda. Xaqiiqdii, waxaan horey uheynay taariikh loogu talagalay taleefanka cusub ee ku dhufan doona suuqa hoostiisa astaanta ZUK.
Ku soo noqoshadeeda suuqa ayaa horeyba loo shaaciyey. War sida xaqiiqada ah dad badani u dabaaldegaan si weyn. Shabakada bulshada ee Shiinaha Weibo waxay ahayd mid dhexdhexaad ah oo ay dooratay ZUK si ay u shaaciso inay suuqa ku soo laabatay. Dib u soo noqoshaduna waxay dhici doontaa si ka dhakhso badan sidii la filayay
Laga soo bilaabo Juun 14 waxaan horeyba ballan ugu leenahay sumadda. Taariikhda aaladda cusub ee shirkadda ayaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa markii ugu horreysay. Taleefan ku saabsan taas oo ay u muuqato in faahfaahinta qaarkood horay loo soo saaray. Wax walba waxay muujinayaan inay calaamad cusub u noqon doonto astaanta.
Wax macquul ah, maadaama ZUK uu yahay hoosaadka Lenovo halkaasoo laga sii daayo telefoonada ugu awooda badan. Dhanka naqshadeynta, waxaan dooneynaa inaan helno taleefan shaashaddiisu dhan tahay, oo leh qaabab aad u dhuuban. Sidoo kale, waxay umuuqataa inaysan shaashad kuheli doonin shaashadda. Xaqiiqdii qaar badan ayaa neefsanaya mar hore.
Laakiin wax badan lagama oga waxyaabaha ku saabsan muraayadaha. Marka waa inaan sugnaa hal bil ilaa aan ka ogaan karno aaladda cusub ee astaamaha. Sugitaan ballanqaaday inaadan niyad jabin. Xaqiiqdii, waa soocelin aad loo filayo macaamiisha. Maaddaama ay tahay nooc caan ka ah gudaha Lenovo.
Waxay u badan tahay taas Toddobaadyadan, faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ee ZUK ayaa la shaacin doonaa. Marka waxaan dheg u noqon doonnaa wixii war ah ee arrintan la xiriira. Sababtoo ah runtii qalabkan cusub wuxuu bixin doonaa waxyaabo badan oo looga hadlo. Sideed u aragtaa soo laabashadan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Lenovo » Lenovo ayaa soo saaraysa taleefan sumaddiisu tahay ZUK bisha Juun 14deeda